पूर्वमा सशस्त्र प्रहरी बललाई उल्लेखनीय सफलता – Dhankuta News : Daily Online News From Nepal
बल जनतामाँझ लोकप्रिय बन्दै
२०७६, १३ असार शुक्रबार २१:३७
धनकुटा । सशस्त्र प्रहरी बलले प्रदेश नम्वर १ मा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको जनाएको छ । बलले प्रदेशमा सीमा सुरक्षा, अवैध चोरी निकासी पैठारी नियन्त्रण, अवैध हातहतियार, लागूऔषध बरामद गर्ने कार्यमा तथा राजश्व संकलनमा समेत सफलता हासिल गरेको जनाएको छ ।
नेपाल सरकारको सीमा सुरक्षा व्यवस्थापन व्यवस्थित बनाउने नीति लिएको छ । सो नीति अन्तर्गत पूर्वी नेपालको सीमा क्षेत्रमा १६ वटा सीमा सुरक्षा पोष्ट (वि.ओ.पी.) रहेकोमा हाल बृद्धि गरी २४ वटा कायम गरिएको छ । पूर्वको विभिन्न सीमा क्षेत्रमा पहिले १६ वटामात्र विओपी रहेकोमा तीन वटा नयाँ स्थापना गरिएको छ । यस्तै ४ वटा बेशलाई स्तरोन्नति गरिएको र थप १ वटा स्वीकृत भई स्थापना गर्न बाँकी रहेको छ । यि सबै गरी २४ वटा विओपी कायम गरिएको सशस्त्र प्रहरी बल प्रदेश नं. १ बाहिनी मुख्यालय पकली सुनसरी स्रोतले जनाएको छ ।
प्रदेश नम्वर १ सरकारको सहयोग र समन्वयमा सीमाको सुरक्षाका लागि तैनाथ सशस्त्र प्रहरी बलको बोर्डर आउट पोष्टहरुको भौतिक संरचना निर्माणतर्फ १२ वटा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेकोमा ६ वटाको निर्माण कार्य सम्पन्न भईसकेको छ । प्रदेश सीमा सुरक्षा व्यवस्थानलाई अझ चुस्त दुरुस्त पारी प्रभावकारी ढंगले परिचालनको लागी झापा, इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ, मोरङ, संखुवासभामा गरी १७ स्थानमा विओपी स्थापना गर्न प्रस्ताव गरेको जनाएको छ ।
सशस्त्र प्रहरी बल प्रदेश नं. १ बाहिनी मुख्यालय पकली सुनसरीमा प्रमुखका रुपमा सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआईजी) मन्दिप श्रेष्ठ गतवर्ष आएका हुन् । उनले कार्यभार सम्हालेदेखि अवैध चोरी निकासी पैठारी नियन्त्रणलाई अभियानकै रुपमा विशेष योजना बनाई क्रियाशील रहेका छन् । उनकै सफल नेतृत्वमा राजश्व असुलीमासमेत विगत वर्षहरु भन्दा बढी संकलन गर्न उल्लेखनीय रुपमा सफलता हासिल गरेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
यस क्षेत्रमा डिआईजी श्रेष्ठ आएपछि राजश्व असुलीतर्फ उल्लेखनीय प्रगती भएको जनाएको छ । उनी आउनुअघि गत वर्ष ०७४ बैसाखदेखि ०७४ चैत्रसम्म ३५ अर्व ६२ करोड ५४ लाख ३५ हजार आठसय ७५ रुपैया संकलन भएको थियो । उनी आईसकेपछि २०७४ चैत्रदेखि २०७६ जेष्ठ मसान्तसम्म ५० अर्व ५३ करोड ९२ लाख ७० हजार सातसय १३ रुपैया राजश्व संकलन भएको छ ।
यसैगरी अवैध हातहतियार बरामत गर्न र लागूऔषध नियन्त्रण र बरामद गर्न समेत ठूलो सफलता हासिल गरेको छ । अभियान सञ्चालन भएपछि संगठनप्रति जनविश्वास बढेकोले लोकप्रिय बन्दै गएको हो । यस्तै विपत् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा पनि १ नम्वर प्रदेशमा सशस्त्र प्रहरी बलले महत्वपूर्ण सहयोग गरेको छ । विपत् तथा जोखिमा परेकाहरुलाई तत्काल उद्वार गरी जीवन रक्षा गर्ने कार्यमा समेत उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको छ । पूर्वी नेपालमा सशस्त्र प्रहरी बलले आपत विपत्मा गरेको तत्काल उद्वार कार्यले आपतको साथीका रुपमा परिचय बनाउन सफल भएको छ । यस्ता कार्यले पूर्वका जनताले एपीएफ भनेको आपत पर्दाको फोर्स समेत भन्न थालिएको छ ।
यस्तै प्रदेश सशस्त्र प्रहरी परिवार महिला संघले समेत स्वास्थ्य परिक्षण तथा उपचार, अनाथ बालबालिका तथा बृद्धबृद्धाहरुलाई आवश्यक पर्ने लत्ता कपडा तथा खाद्यान्न वितरण गर्दै आएको संघका अध्यक्ष रोजी श्रेष्ठले जानकारी दिईन् ।